Yeshiva University - Finoana Jiosy oniversite any Etazonia. EducationBro
Aza adino ny miresaka momba Yeshiva University
Misoratra anarana ao amin'ny Yeshiva University
Yeshiva University dia miankina andrim-panjakana izay naorina tamin'ny 1886.
Saram-pianarana saram in Yeshiva University dia $40,000 (aprox.).
Yeshiva University dia Jiosy andrim-panjakana ao New York City. Ny anjerimanontolo Mizara telo undergraduate kolejy: Yeshiva College, ny Stern College ho an'ny Vehivavy sy ny Sy Syms School of Business, samy amin'ny campus manerana an'i Manhattan. A oniversite ireo mpianatra mpitondra rafitra mivezivezy eo amin'ny campus. Ny oniversite ihany koa dia manana oniversite teo amin'ny Isiraely, izay mihoatra noho 600 ireo mpianatra isan-taona amin'ny alalan'ny fianarana ny S. Daniel Abraham Isiraely Program. Mpianatry ny taona voalohany dia tsy maintsy hiaina ao amin'ny fonenan'ny mpianatra, na dia maro aza mifidy ny hanao izany. Misy maro ny mpianatra fikambanana amin'ny toeram-pianarana, avy amin'ny solosaina ny siansa Club ny Mpianatra Famonoana Tambabe Education Movement. Ny Yeshiva Makabeo fanatanjahan-tena ekipa mifaninana amin'ny NCAA Division ambaratonga III. Ny sekoly dia manana Center ho an'ny Jiosy Future, izay mpanohana ny tetikasa toy ny Yu Torah Online. Mpianatra mamaritra Shabbat fandaharana tsy tapaka, ka mamokatra boky sy gazety amin'ny fonenan'ny mpianatra tsirairay, anisan'izany ny gazety Ny mpaneho hevitra sy The Observer.
Yeshiva University mahazo tanana aminy noho ny tena fahafahana laharana fikarohana tao amin'ny Albert Einstein College ny Medicine, ary Yeshiva manana lalàna sekoly, koa. Ny sekoly dia manana diplaoma maro fanatitra manokana ho an'ny Jiosy ny finoana amin'ny alalan'ny Azrieli Graduate School ny Jiosy Fampianarana ary Administration sy ny Bernard Graduate School Revel, izay manolotra ny mari tompony ao amin'ny faritra toy ny Jiosy Medieval Tantara sy ny Jiosy filozofia.
Ary amin'ny taonjato faharoa, Yeshiva University no tranainy sy feno indrindra fanabeazana rafitra eo ambany fiahian'ny Jiosy any Amerika. Izany dia mitovy lenta amin'ny oniversite tsy miankina eo amin'ny firenena mpitarika andrim-panjakana sy ny fikarohana akademika, mampiseho ny fotoana-voninahitra fampianarana voatolotry ny razana Torah Umadda, manome ny faran'izay tsara sy tsy ara-pivavahana Jiosy fanabeazana ny misy Jiosy oniversite eto an-tany. Hatramin'ny niandohan'ny ny University efa voatokana ho melding ny fomba amam-panao fahiny ny lalàna jiosy sy ny fiainana amin'ny lovan'i sivilizasiona tandrefana, ary isan-taona dia mankalaza toy ny hoavy mpitarika manao ny tranony Yu.
● Languages, Haisoratra, sy kolontsaina (Classical sy Modern teny)
● Robert M. Mitondra Jiosy Studies
● bola ary
● Jay sy Jeanie Schottenstein asa manavanana Program
The University, rehefa naorina tao 1886, dia ny fikambanana tranainy indrindra ny fianarana ambony any Etazonia izay manam-pahaizana jiosy Mitambatra tamin'ny Fianarana ny liberaly zava-kanto, siansa, fanafody, lalàna, raharaham-barotra, asa ara-tsosialy, Jiosy fianarana sy ny fanabeazana, sy ny psikolojia. Tsy manana ny fakany tao amin'ny Yeshiva Chaim Etz naorina tamin'ny 1886 ny Lower East Side any Manhattan, ny cheder-fomba nanangana sekoly fanabeazana fototra amin'ny alalan'ny Eoropa Atsinanana mpifindra monina izay nanatitra fianarana ny Talmoda miaraka amin'ny fianarana tsy ara-pivavahana sasany, anisan'izany ny fampianarana amin'ny teny anglisy.
Tamin'ny Aogositra 2012, Yeshiva University enrolls eo ho eo 6,400 undergraduate mpianatra, 3,500 nahazo diplaoma ireo mpianatra, ary 1,000 mpianatra amin'ny sekoly ambony ny mpikambana sy ny Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary. Tsy nanome 1,822 diplaoma in 2007 ary manolotra asa fanompoana tetikasa fiaraha-monina manompo New York, Jiosy, ny Etazonia sy Kanada. Richard M. Joel no Yeshiva ny filoha University, raha Rabbi Dr. Norman Lamm nanompo toy ny Chancelier mandra- 2013. Joel no prezidà voalohan'ny Yu izay tsy nisy raby. Ny lasa mpitarika oniversite dia ahitana Dr. Bernard Revel, Dr. Samuel Belkin, ary “The Rav,” Rabbi Joseph B. Soloveitchik. Tamin'ny Aprily 2015 Moshael Straus voafidy ho Lehiben'ny Board Yeshiva University. Straus, Hahomby Henry Kressel, izay enin-taona ho toy ny lohany amin'ny oniversite ny birao nifanindry tamin'ny vanim-potoanan'ny “krizy ara-bola” tany amin'ny oniversite. Straus, izay manompo amin'izao fotoana izao toy ny mpitari-draharaha lefitra, no mpikambana ao amin'ny birao satria 1998. Ny teny hoe nanomboka tamin'ny Jolay 1, 2015. Ny anjerimanontolo dia mihazakazaka ny fandidiana fahabangan'ny nandritra ny fito taona nisesy. In 2014 dia very $84 tapitrisa, ary amin'ny 2013 Nijaly ny fahaverezan'ny $64 tapitrisa. Tamin'ny volana Martsa 2015, amin'ny sampam-pianarana ny Yeshiva College nandalo ny “no-matoky mihetsika” an'i Richard Joel, ny filohan'ny oniversite. Profesora Gillian Steinberg, mpikambana iray ao amin'ny komity mpanatanteraka Yeshiva College, nilaza The New York Jiosy Week fa ny fifidianana natao ho "faneva mpamatsy vola amin'ny fomba manan-danja", ary "manondro fa ny Filankevi-pitantanan'ny dia mihetsiketsika any amin'ny lalana diso.
Tamin'ny volana Janoary 2016 ny University nampahafantatra fa dia cede efa ho ny antsasaky ny $1 lavitrisa fanafiana masina any amin'ny Albert Einstein School of Medicine, toy ny mpitsabo miditra kolejy ny misaraka mpiray barotra amin'i Montefiore Health System.
Ianao ve mila miresaka momba Yeshiva University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Yeshiva University ao amin'ny Map
Photos: Yeshiva University ofisialy Facebook
Yeshiva University Hevitra
Miaraha mba hiresahana amin'ny Yeshiva University.
University of North Carolina ao amin'ny Chapel Hill Chapel Hill
avaratrandrefan'i University Evanston
Oniversiten'i Wisconsin-Madison Madison